"Kubva kuIjipita ndakadana mwanakomana wangu."
Testamende Yekare yeBhaibheri inotaura nezvaJesu seMwanakomana waMwari.
Testamende Yekare (OT) inoti Mwari ane mwanakomana. Uye zvakanyorwa pamusoro paJesu muTesitamende yekare zvinozadziswa muTestamente Itsva (NT).
"Kubva ku Egypt Ini Ndadana Mwanakomana Wangu"
Kuporofita uye GT
Pana 11: 1: "Israeri achiri mudiki, ini ndakamuda pamwe naye, ndikadana mwanakomana wangu abve muIjipita ."
Kuzadzikiswa kuri mutestamende itsva
Matthew 2:15: "Uye akagara ipapo kusvikira pakufa kwaHerodhi, kuti zvizadziswe zvakataurwa naIshe nemuporofita, achiti:" Ndadana mwana wangu abude muIjipita . "
Mwanakomana wake anonzi ani?
Zvirevo 30: 4: " Ndiani akakwira kudenga, akaburuka? Ndianiko akaunganidza mhepo mumaoko ake? Ndiani akasungira mvura munguvo? Ndiani akaseta miganhu yepasi? Anonzi ani zita rake, uye anonzi ani mwanakomana wake ?" - unozviziva? "
Johane 3:13: "Uye hakuna munhu akakwira kudenga, kunze kwaiye akaburuka kudenga , iye Mwanakomana woMunhu [Jesu], iko kudenga."
Ps 45: 6: "Mwari, Chigaro chenyu choushe chiripo nekusingaperi-peri, tsvimbo yeushe hwenyu itsvimbo yekururamisira."
Vaheberi 1: 8: "Asi kana ari Mwanakomana , unoti," Mwari, chigaro chenyu cheushe chiripo nekusingaperi, uye mbiru yekutonga ndiyo mbiru yeushe hwenyu. "
Vecka 24, fredag 18 juni 2021 kl. 02:00